धैर्य र संयमता : सफलताको साँचो हो ! – Chitwan Post
वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता प्रेम रावतले भिडियोका माध्यमबाट निरन्तर मानिसहरूको जीवनमा उत्साह र आत्मविश्वास बढ्न सकोस् भन्ने हेतुले मानिसहरू समक्ष आफ्नो सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएको छ । उहाँको सन्देशसँग सम्बन्धित केही अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
मलाई आशा छ, यो बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ । आनन्दमा हुनुहुन्छ । अनि, यो दिनलाई तपाईंले आफ्नो हातबाट रित्तै फुत्कन दिनुभएको छैन । कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै प्रकारले तपाईंले आफ्नो जीवनमा यो समयलाई, यो दिनलाई सदुपयोग गर्न सिक्नुभएको छ ।
कोरोना भाइरसको यो परिस्थितिमा तपाईं दुःखी नै भइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तपाईं जहाँसुकै हुनुहोस्, जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहोस्, वास्तविक खुसी त तपाईंभित्रै हुन्छ । बाहिर के भइरहेको छ, के भइरहेको छैन– त्यससँग त्यो वास्तविक खुसीलाई केही लिनुदिनु छैन । वास्तविक चीज त तपाईंभित्रै छ । अनि, सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईं त्यस आनन्दलाई आफैँसँग लैजान सक्नुहुन्छ । खाली हात त आउनुभएको थियो । खाली हात नै तपाईंले जानुपर्ने पनि हुन्छ तर तपाईंले जीवनको आनन्दलाई साथैमा लिएर जान सक्नुहुन्छ । यो परिस्थितिमा पनि त्यो आनन्द तपाईंभित्रै छ । कुरा के मात्र हो भने के तपाईंलाई त्यो खानी खन्न आउँछ ? त्यो खेत जोत्न आउँछ ? किनकि, यदि तपाईंले त्यो खेतलाई जोत्नुभयो भने त्यहाँबाट केही न केही त अवश्य उत्पादन हुनेछ । अनि, तपाईंले त्यस चीजलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ जसबाट तपाईं वास्तवमा सम्पन्न अर्थात् धनी बन्न सक्नुहुनेछ ।
यस संसारमा केही मानिसहरू यस्ता छन्– यदि उनीहरूलाई धनी बन्नु छ भने पैसा नै चाहिन्छ भन्ने सोच्छन् । अनि, केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जसलाई यदि धनी बन्नु छ भने त्यसका लागि ‘हृदयबाट धनी हुनुपर्छ र हृदयमा आनन्द हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा थाहा छ । उनीहरूभित्र रहेको दिव्य चीजसँग उनीहरूले परिचय गर्नुपर्दछ । त्यसलाई उनीहरूले चिनेपछि, त्यसका बारेमा जानेपछि मात्र उनीहरू वास्तविक धनी बन्नेछन् । जो पैसावाला धनी हुन्छन्, तिनले पैसालाई आफूसँग लिएर जान सक्दैनन् । यद्यपि आनन्दलाई आफ्नो साथमा लिएर जान सक्छन् । यदि तपाईंलाई वास्तविक आनन्द चाहिन्छ भने त्यसका लागि आफूले आफूलाई चिन्नुपर्नेछ । आफूले आफूलाई पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
दुई प्रकृतिका मानिसहरू हुन्छन् । पहिलो त्यो हो, जसलाई थाहा छ– उसले सधैँ के बुझ्ने कोसिस गरिरहन्छ भने उभित्र आइरहेको श्वास कति मूल्यवान छ । दोस्रो त्यो जसभित्र श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ तर त्यससँग उसलाई केही वास्ता हुँदैन । उसले वास्तवमा खोजिरहेको चीज त ऊभित्रै विराजमान छ । यो कुरासँग पनि उसलाई केही मतलब हुँदैन । दुवै व्यक्तिसँग के हुन्छ ? एक दिन पहिलो व्यक्तिले पनि जानुपर्छ अनि एकदिन दोस्रो व्यक्तिले पनि जानुपर्छ । पहिलो त खाली हात अवश्य आएको थियो तर खाली हात जानेछैन । किनभने, उसको हात वास्तविक आनन्दले भरिभराउ छ । अनि अर्को, उसको हात खाली छ । किनभने, उसले त्यस आनन्दलाई स्वीकार नै गरेन ।
धेरै समयअघिको कुरा हो । एकजना राजा थिए । तिनी निकै नै धनी थिए । एकदिन उनले एउटा सपना देखे । उनले यो देखे– उनी छिमेकी देशसँग युद्ध गरिरहेका थिए । एकदमै ठूलो युद्ध भइरहेको थियो । उनले त्यो युद्धमा सारा राजपाट, धन सम्पत्ति सबैथोक हार्छन् । त्यसपछि उनले आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि त्यो युद्ध मैदानबाट भाग्नुपर्ने भयो । भाग्दा–भाग्दा उनी एउटा जङ्गलमा पुग्छन् ।
पानी परिरहेको हुन्छ । उनलाई भोक पनि लागेको छ । उनी एकदमै थाकेका छन् । उनले आराम गर्नका लागि कुनै पनि ठाउँ भेटाइरहेका हुँदैनन् । त्यहाँ यसो खान पाइयोस् भन्ने पनि भएन । अझ अलिकति टाढा हिँड्दै जाँदा उनले एउटा सानो झुप्रोलाई देख्छन् । त्यस छाप्रोमा एउटी वृद्ध महिला बसेकी थिइन् । उनले ती वृद्ध महिलासँग भन्छन्– “आमा तपाईंसँग केही खाने कुरा भए दिनुहोस् न !”
वृद्ध महिलाले भन्छिन्, “महाराज, मसँग त केही पनि छैन । यो अलिकति दाल र चामल छ । यसको खिचडी बनाएर खानुहोस् ।”
राजाले उनलाई धन्यवाद दिँदै दाल–चामल लिए । त्यसपछि उनले जङ्गलबाट केही दाउरा खोजेर ल्याए । आगो बाल्ने कोसिस गर्न थाले । दाउरा भिजेको थियो । एकदमै कठिनसँग उनले आगो बाले । जसोतसो गरेर खिचडी पकाए । खिचडी पाकेपछि उनले एउटा पातमा त्यसलाई सेलाउन भनेर पस्किए । यत्तिकैमा दुईवटा साँढे जुध्दैजुध्दै आए अनि त्यो सारा खिचडीलाई माटामा मिलाइदिए ।
यस घटनापश्चात् राजाको आँखाबाट अश्रु बहन लागे । यत्तिकैमा उनी निद्राबाट बिउँझिए । उनी चारैतिर हेर्छन् । पाले–पहरेहरू उभिइरहेकै छन् । त्यही पलङ, त्यही राजमहल, तिनै सबै चीजहरू छन् । अनि, उनको मनमा शङ्का भयो– साँचो कुराचाहिँ के हो ? जे म देखिरहेको छु यो सपना हो या जुन मैले केही समयअघि देखिरहेको थिएँ, त्यो सपना हो ?
उनले सारा देशवासीलाई आह्वान गरिदिए– “जसले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन्छ, तिनलाई म सारा राजपाट सुम्पिदिनेछु । उत्तर दिन भनेर ठूला–ठूला आचार्य, ठूला–ठूला विद्वान्हरू आए । तर, राजा तिनको उत्तरबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
एकदिन एकजना साना बालक– जसको नाम अष्टावक्र थियो । उनका हात–खुट्टा बाङ्गाटिङ्गा थिए । शरीर पनि बाङ्गाटिङ्गो थियो । उनी राजाको दरबारमा आउँछन् । सबैजनाले उनलाई देखेर हाँसोमा उडाइरहेका हुन्छन्– “यस्तो मानिस ! शरीर नै कुरूप छ । यस्ताले के यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन् ?”
अचानक उनले राजातिर हेरेर भने, “महाराज ! तपाईंले मलाई यस्ता मानिसहरूका बिचमा किन बोलाउनुभएको ? यिनीहरूले मेरो अपाङ्गतालाई देखेरै म कस्तो हुँ भन्ने अनुमान गर्ने मुख्र्याईँ गरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई त मेरो बाहिरी शरीरसँगको मात्रै चिनारी छ । तर, मभित्र जे छ त्यसका बारेमा यिनीहरूलाई थाहा छैन ।”
राजालाई महसुस भयो– यिनी पक्कै सामान्य मानिस होइनन् । यिनी कोही विशेष हुनुपर्छ । राजाले उनलाई स्वागत गरेपछि नम्रतापूर्वक उनीसँग सोधे– “सन्तजी, मलाई बताउनुहोस्, कुनचाहिँ सपना सत्य हो ? जुन म देखिरहेको थिएँ के त्यो सत्य हो या जुन म अहिले देखिरहेको छु, यो सत्य हो ?”
त्यसपछि अष्टावक्रले उनलाई जवाफ दिँदै भन्छन्, “महाराज ! यी दुवै स्वप्ना हुन् !”
जे तपाईंले सपनामा देख्नुभयो, न त त्यो सत्य हो । किनकि, त्यो एउटा सपना थियो । जुन तपाईं अहिले यी आँखाले देखिरहनुभएको छ, जसलाई तपाईं वास्तविक मान्नुहुन्छ– न त यो सत्य हो । किनभने, यो पनि एउटा सपना नै हो । सत्य त केवल एउटा परमात्मा हुन् । तिनलाई चिन्नुहोस् । यदि तपाईंले उनलाई चिन्नुभएन भने जति पनि गर्नुभएको छ, त्यो पनि सबै व्यर्थ जानेछ ।
यो संसारमा सुख–दुःखका पछि सबैजना लागेका छन् । तर, एउटा वास्तविक सुख पनि छ अनि त्यो सुख तपाईंको हृदयमा छ । जबसम्म तपाईं त्यस सुखलाई बुझ्नुहुन्न, चिन्नुहुन्न तबसम्म तपाईंको हृदयमा आभार उत्पन्न हुनेछैन । तपाईंको जीवनमा आभार उत्पन्न हुनेछैन । जसरी आउनुभएको थियो त्यसरी नै तपाईं एकदिन जानुहुनेछ । तर, एउटा सम्भावना छ, तपाईं आफ्नो जीवनलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । किनभने, तपाईंभित्रै त्यो परमसुख छ । तपाईंले त्यसलाई चिन्नुभएपछि तपाईंको जीवनमा पनि सुख नै सुख प्राप्त हुनेछ ।
प्रेम रावत ५२ वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सारा संसारमा मानवता एवम् शान्तिका विषयमा सन्देश प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई यस कार्यका लागि थुप्रै संस्थाहरूद्वारा शान्तिदूतको उपाधि पनि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका अतिरिक्त उहाँले “द प्रेम रावत फाउन्डेसन” नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस संस्थाका थुप्रै कार्यक्रमहरूमध्ये “जनभोजन” पनि एक हो । यसबाहेक यस संस्थाले यस्तो विपत्तिमा पनि विपन्न मानिसहरूलाई राहतको सामग्री बाँड्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।